आयातमा छैन समस्या, उपभोग्य सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात (कुन सामान कति?)
समाचार उद्योग उपभाेक्ता
सरकारले अत्यावश्‍यक र उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हरेक देशले फरक फरक किसिमबाट कडाइ गरिररहेका छन्।
नेपालले पनि देशलाई लकडाउन गरेको छ । मंगलरबार कतिपय स्थानहरूमा अवज्ञा गरिएकामा बुधबारबाट कडाइका साथ लागू गरिने प्रहरी प्रशासनले जनाएको छ ।
कोरोनाको संक्रमण विश्‍वव्यापी भएका बेला शहरमा रहेका उपभोक्तालाई उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव हुने चिन्तामा मौज्दात बढाएको गुनासो व्यापारीहरूको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उपभोग्य सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात रहेको भन्दै उपभोक्ताले अनावश्‍यक मौज्दात गर्न आवश्‍यक नरहेको बताएका छन् ।
यथास्थितिमा पनि कतिपय वस्तुहरू १० महिनासम्मका लागि पुग्ने गरी मौज्दात रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन वस्तु कति मौज्दात ?
आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी मौज्दात नुनको रहेको छ । अहिले खपतअनुसारकै बिक्री भएको अवस्थामा १ लाख ५९ हजार मेट्रिक टन नुन मौज्दात रहेको छ । यसले १० महिना नेपालको माग धान्नेछ ।
अहिले पनि ३ महिनालाई पुग्ने गरी चामल मौज्दात रहेको जनाइएको छ । चामल दैनिक १५ लाख मेट्रिक टन खपत भएकामा २५ हजार ७ सय १८ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चिनीको मौज्दात ७ हजार ५०० मेट्रिक टन रहेको छ । यो उद्योगमा भएको मौज्दातबाहेक हो ।
नियमित आपूर्ति भएको पेट्रोलिय पदार्थको पनि मौज्दात भएको सरकारले जनाएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी माग भएको ग्यासको मौज्दात पनि रहेको बताइएको छ । ग्यासको आपूर्ति ७ सय २० मेट्रिक टन रहेकामा ३१ हजार ९४४ मेट्रिटक टन बिक्री भएको छ ।
मार्च महिनामा ५० हजार मेट्रिक टन कोटा रहेकामा ३१ हजार ९४४ आपूर्ति भएको र आयात नियमित भइरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
डिजलको आपूर्ति २७ सय ५२ किलो लिटर छ भने बिक्री २७ सय २१ किलो लिटर छ । अहिले निगमसँगको मौज्दात ५९ सय ४७ किलो लिटर रहेको छ ।
पेट्रोलको आपूर्ति ५३ सय ८० किलोलिटर रहेको छ भने ८६ सय ३६ किलो लिटर भएको छ । तर, हालसम्मको मौजदात ३४ हजार १७४ किलो लिटर रहेको निगमले जनाएको छ ।
भन्सार विभागले पनि आयातमा समस्या नरहेको जनाएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको फागुन महिनाभन्दा बढी आयात यस वर्षको फागुन महिनामा भएको छ जबकि समग्रमा हाम्रो आयात गत वर्षको भन्दा कम रहेको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले आयातमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । ‘आयातमा कुनै समस्या रहेको छैन, हामीले दैनिक उपभोग्य सामग्री र अत्यावश्‍यक सामग्रीको २ घण्टाभित्र जाँँचपास गरेका छौँ’, दाहालले शिलापत्रसँग भने, ‘कतिपय जिल्लामा समन्वयमा समस्या देखिए पनि मिलाउँँदै गएका छौँ ।‘
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ११, २०७६, ०६:१५:००